Kismaayo News » Muuse Biixi oo Itoobiya ka buskiciyay
Muuse Biixi oo Itoobiya ka buskiciyay
Kn: Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi ayaa safarkii 2aad ee dibadda uu uga baxo ku tagay magaalada Adis Abba ee dalka Itoobiya. Muuse oo si maqaam sare ah loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Pole ayaa la kulmay ra’iisal wasaaraha dalkaasi Haylemariam.
Labada masuul ayaa la sheegay inay ka wadahadleen arimo ay kamidyihiin amniga iyo ganacsiga ayadoo meesha aysan kamarnayn isla soo qaadista saldhigga Somaliland ay siisay Isutagga Imaaraadka, taasi oo xulifo dhaw la ah dawladda Masar oo xurguf xagga biyaha wabiga Niil ay ka dhaxayso.
Itoobiya ayaa sheegtay inaysan gorgortan ka galayn hadii ciidamo Masaari ahi ay yimaadaan deegaamada Somaliland. Sidoo kale waxaa wadahadallada ubuc u ahaa dekedda Berbera oo dawladda Itoobiya qandaraas ka haysatay laakiin ay Somaliland heshiis dib u habayn kula gashay shirkad laga leeyahay Imaaraadka Carabta.
Muuse Biixi ayaa dhankiisa isku dayaya inuu Itoobiya ku qanciyo in heshiiska ay Somaliland la gashay Imaaraadka aysan waxba u dhimayn xiriirka labada daraf ay horay u gaareen ee ku saabsanaa amaanka iyo ganacsiga.